पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरी आएको छु, १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री उठ्छु: प्रकाशशरण महत « Asia Sanchar : Nepal News Live
पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरी आएको छु, १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री उठ्छु: प्रकाशशरण महत
१९ मंसिर २०७८, आईतवार १३:४७
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर – नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछिल्लो कार्यकाल सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । संविधानसभा सदस्य महतले संविधान निर्माण मस्यौदा कार्यदलको सदस्यका रूपमा पनि काम गरे । उनीसँग परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । आफ्नो पार्टी तथा सार्वजनिकरूपमा समसामयिक एवं राजनीतिक विचारहरू राख्नसक्ने स्पष्ट वक्ताका रूपमा महत परिचित छन् । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरेका महतसँग महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समितिले गरेको कुराकानीः
तपाईहरू १४ औँ महाधिवेशनको संघारमा हुनुहुन्छ । तेह्रौँ महाधिवेशनमा नै अघि सारिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन नसकेको गुनासो यतिखेर पार्टी भित्र छ । के कति कारणले ती प्रतिबद्धतहरू पूरा हुन सकेनन् ?
–हो, कतिपय प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन नसकेको पनि छ । भातृ सङ्गठन गठनदेखि अरू कतिपय विषयहरूमा यो अवस्था देखियो । तर मूल कुरा त पार्टी सभापतिजीले पार्टी एकतालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुभयो । पार्टीमा कुनै पनि खाले विग्रह र असन्तुष्टि नबढोस् भन्नेमा उहाँ बढी नै सजग रहनुभयो । नेपालका कम्युनिष्टहरूबीचको एकताका कारण नेपाली कांग्रेस संसदमा सानो दल भएको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा जसरी पनि पार्टीलाई एक बनाएर अर्को निर्वाचनमा जानुपर्छ र पार्टीले अबको निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने नै उहाँले मूल लक्ष्य राख्नुभयो । पछिल्लो समयमा संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ अवस्थामा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीमा समेत बिग्रह र असन्तुष्टिहरू आए र फुट्यो । यो अवस्था हेर्दा त पार्टी सभापतिले लिएको रणनीति सही हो भन्ने नै देखियो ।
अहिले पनि पार्टी सभापतिमा दोहोरिएर शेरबहादुर देउवा नै उठ्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । आगामी कार्यकालमा पनि ती प्रतिबद्धताहरू पूरा हुन्छन् भन्ने के सुनिश्चितता छ?
–अवश्य पनि पार्टीलाई गतिशील बनाउने, पार्टीका सबै भातृ सङ्गठनहरूलाई गतिशील बनाउने, पार्टीमा देखिनसक्ने आन्तरिक विवादलाई व्यक्तिगत नभई संस्थागत गरेर लैजाने, पार्टीको रेकर्ड प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने, मूल्याङ्कन पद्दतिलाई वैज्ञानिक बनाउने, सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरेर पार्टीका क्रियाकलापहरूको प्रचारलाई चुस्त बनाउने, हामीले गरेका कामलाई जनताका बीचमा पु¥याउनेजस्ता कार्यहरू गर्नु जरुरी छ र यो सबै गर्न अब आउने कार्यकालमा गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि अबको कार्यकालमा सभापतिजीसँगै जुन नयाँ टिम जान्छ त्यो टिमले सशक्तरूपमा काम गर्छ र पार्टीलाई एउटा गतिशील पार्टीका रूपमा रुपान्तरण गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ ।
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको दौरानमा छ । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले महाधिवेशनमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छन् । यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ?
–नेपाली कांग्रेसले मुलुकको संविधान र सङ्घीय ढाँचामा आफ्नो विधान निर्माण गरेको छ । अहिले कांग्रेसका समग्र देशका कार्यकर्ताहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छन् । तपाइँले देखिरहनुभएको छ नि देशका अरु पार्टीहरू पनि महाधिवेशनमा छन्, तर हाम्रोजस्तो खुला हृदयले निर्वाचनमा जाने र प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने काम अन्त कहाँ देखिएको छ रु हाम्रो विधान बढी समावेशी छ, जसले एकतिहाइ महिलाको स्पष्टसँग सुनिश्चितता छ । वडादेखि केन्द्रसम्म नै कुनै पनि वर्ग समूहको तथा जनसङ्ख्याका आधारमा समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कुरा हाम्रो विधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले ठूलो सङ्ख्यामा धेरै पृष्ठभूमिका मानिसहरू समेटिन्छन्, उनीहरू यो अभ्यासमै छन् ।
अहिले बजारमा एउटा प्रश्न छ, शेरबहादुर देउवा नै फेरि सभापति किन ? यसको जवाफ तपाईले कसरी दिनुहुन्छ?
–यो नेतृत्व भनेको आवश्यकताले निर्धारण गर्दछ । जस्तो कि हेर्नु न जनतालाई त्यति धेरै आश्वासन बाँडेर ठूलो सङ्ख्यामा मत ल्याएर आएका कम्युनिष्टहरू पनि तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै आफ्ना आन्तरिक लुछाचुँडी र सत्ता भागले गर्दा आन्तरिक व्यवस्थापन नै गर्न सकेनन् । कम्युनिष्टहरूमा ठूलो विद्रोह र असन्तुष्टि देखियो, सत्ताकै लागि उनीहरूको पार्टीभित्रै के–कस्तो झगडा भयो हामीले देख्यौँ नै । त्यहाँ व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भयो, उनीहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । त्यसको ठिक विपरीत मोडलमा शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई हाँक्नुभयो । बरु आफूले कतिपय कुराहरू छोड्ने तर सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि सहमति गरेर लैजाने मोडेलमा सभापति देउवाले पार्टी हाँक्नुभयो । उहाँले पार्टीमा कसैलाई पनि असन्तुष्टि बढ्ने ठाउँ नदिने बुद्धिमत्तापूर्ण बाटो अवलम्बन गर्नुभयो । यसले पनि हाम्रो पार्टीलाई आजका दिनसम्म एकढिक्का बनाएर राख्न सफल भएको छ । उहाँ एक्लै कहिल्यै अघि बढ्नुभएन । जस्तो कि भन्नु न पार्टीको महाधिवेशनकै विषयमा पनि उहाँप्रति कति आरोप प्रत्यारोपहरू लागेका होलान् तर तिनलाई प्रतिवादमा पनि नउत्रिकन, जवाफ पनि नदिइकन सहेरै उहाँ बस्नुभयो । यो सब पार्टीको एकताकै लागि थियो भन्ने मेरो बुझाइ छ । उहाँले पर्टीभित्रका सबै खालका विचारहरूलाई सम्मानपूर्वक स्थान दिएर राख्नुभएको छ ।
पार्टीभित्रको यो उहाँको नीति देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । उहाँ कसले के भने भनेर त्यसको पछि–पछि लागेर प्रतिवाद गर्नेतिर कहिल्यै लाग्नुभएन । देशको राजनीति कतातिर गइराखेको छ त्यसको सुक्ष्म यकिन गर्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो त्यसैले त उहाँले अहिले देशको कार्यकारीका रूपमा नेतृत्व गर्न सफल हुनुभएको छ । जस्तै भन्नु न देशमा नेपाली कांग्रेसको बढी मत भए पनि सांसद सङ्ख्याका आधारले गर्दा कम्युनिष्टहरू सरकार निर्माणमा बलिया थिए । तपाईँले पनि सुन्नुभयो नि उनीहरू अब देशमा ५० वर्षसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्थे । तर उनीहरूले यही एउटै कार्यकालको भार पनि थेग्न नसकेर राजनीतिक सङ्कटबाट देशलाई बचाउन देउवा नै आउनुप¥यो । हामी त संसद्मा सानो थियौँ । तर पनि नेपाली जनताले त स्पष्टरूपमा कांग्रेसले नै देश हाँक्न सक्छ भन्ने खाँचो महसुस गरे नि । त्यसैले उहाँ नै सरकारको नेतृत्व गर्न अघि बढ्नुप¥यो । देशको संसद् बचाउन उहाँ नै अघि सर्नुप¥यो । उहाँमा पार्टीमा जस्तै देशमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पनि मिलाएर लान सक्ने, उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुने गरेकाले नै तपाईँले नेतृत्व गरिदिनुप¥यो भनेका हुन् । त्यसैले अब आउने निर्वाचनमा पनि पार्टीलाई जिताएर लैजान र पार्टीेभित्रका असन्तुष्टि र विग्रहलाई पराकाष्ठामा लैजान नदिनका लागि नेपाली कांग्रेसमा पनि अबका दिनमा उहाँजस्ता नेतृत्वको आवश्यक छ । उहाँले भनिरहनुभएको पनि छ, त्यतिबेला कम्युनिष्टहरू मिल्दा कांग्रेसले हार ब्यहोर्नुपर्‍यो, अब सभापति भएर पार्टीलाई ठूलो पार्टी बनाउँछु र अबका निर्वाचनमा जिताउँछु । यसका लागि पनि आउँदो अधिवेशनमा उहाँलाई नै जिताउनुपर्छ ।
तपाईले पनि पार्टीको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो ?
–हो । यद्यपि, औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर घोषणा गरेको भने छैन, त्यो पनि म छिट्टै गर्नेछु । मैले पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यदेखि सहमहामन्त्रीसम्मको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको छु । नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वदेखि पार्टीका विभिन्न तहमा रहेर काम गरेको छु । मलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पार्टीमा होस् या सरकारमा रहेर पनि निष्ठापूर्वक सम्पन्न गरेको छु । त्यसैले आसन्न महाधिवेशनमा महामन्त्रीको पदमा मेरो उम्मेदवारी रहने छ । यसैबमोजिम मैले महामन्त्रीका लागि तयारी गरिरहेको छु र पार्टी नेतृत्वसँग पनि यस विषयमा कुरा भइरहेको छ ।
प्रकाशशरण महतलाई किन मत दिने भन्ने प्रश्नको जवाफ तपाई कसरी दिनुहुन्छ?
–मेरो अनुभव र दक्षताअनुरुप पार्टीलाई आधुनिकतामा परिणत गर्न म प्रयत्नरत रहनेछु । जहाँसम्म यहाँले प्रश्न गर्नुभयो डा महतलाई किन मत दिने भनेर, यसको म जवाफ दिन चाहन्छु । जस्तो कि म प्रतिबन्धितकालदेखि नै नेपाली नेपाली कांग्रेसमा लागेर काम गरिरहेको छु । मैले विद्यार्थीकाल त के स्कुले जीवनदेखि नै मैले नेविसङ्घमा लागेर काम गरेको छु । मैले जेलनेल भोगेको छु । मैले आजदेखि होइन नि २०२९ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि लिएर २०६२–६३ को आन्दोलनसम्म कांग्रेसको पक्षमा लागेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छु । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि केही समय बाहिर अध्ययनमा गएको समयबाहेक अरु सबै समय सक्रियरूपमा पार्टीमै लागेको छु । म सरकारमा रहँदा होस् या पार्टीमा पनि जे–जस्तो जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेँ त्यो पनि उच्च समर्पणका साथ पूरा गरेको छु । इमानका साथ मेरो सम्पूर्ण क्षमता र प्रयोग गरेर पार्टीले मलाई सरकारमा होस् या पार्टीमा दिएको काम इमान्दारिताका साथ पूरा गरेको छु । म दुईपटक परराष्ट्र मन्त्रालयलको जिम्मेवारी सम्हाल्दा होस् या ऊर्जामन्त्री हुँदा पनि मैले पार्टीको इज्जत राखेर काम गरेको छु । संविधान निर्माणको मस्यौदा समितिमा रहँदा पनि मैले सक्रिय र सिर्जनात्मकरूपमा आफ्नो योग्यताको प्रयोग गरेको छु । अनि पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा होस् या महामन्त्री रहँदा होस् देश र पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको छु ।
हेर्नोस्, मैले जहाँ जिम्मेवारी लिन्छु त्यहाँ पूर्ण समर्पण र लगावका साथ काम गर्छु, गरेकै छु । म पार्टीमा रहँदा होस् या सरकारमा होस् मैले निष्ठा र पूर्ण लगावका साथ काम गर्ने गरेको छु । स्कुले जीवनदेखि पछिल्लो आन्दोलन, २०६२।६३ को जनआन्दोलनसम्म नै मैले पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरेको छु । नेविसङ्घको स्कुल एकाइदेखि लिएर पार्टीको सहमहामन्त्रीसम्म मैले निष्ठाका साथ काम गरेको छु ।
महामन्त्री त पार्टी सभापतिपछिको एक सक्रिय पद हो । तपाई महामन्त्री भए पार्टीमा नयाँ काम के गर्नुहुन्छ ?
–नेपाली कांग्रेस संसारकै एक उत्कृष्ट र प्रजातान्त्रिक विचार भएको पार्टी हो । यसले देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा धेरै काम गरेको छ । तर तपाईँले देख्नुभएको छ नि कम्युनिष्टहरूले आफूहरूले मात्र काम गरेको जस्तो गरी प्रचार गरिरहेका छन् । वर्तमान संविधान नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्माण भएको होइन ? त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हाम्रा पार्टी सभापतिले नै पहिला स्थानीय र लगत्तै संसद्को निर्वाचन गराउनुभएको होइन रु यही संविधान र हामीले नै गरेको पछिल्लो निर्वाचनपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको होइन रु तर अहिले हेर्नोस् त कम्युनिष्टहरूले सबै आफैँले गरेजस्तो गरेर प्रचार गरेका छन् । वर्तमान संविधानमा महिला, मधेशी, विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, जनजाति आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हामीले गरेको होइन रु यी त पछिल्ला एकाध उदाहरण मात्र दिएँ यहाँलाई । यसबाहेक हामीले गरेका धेरै काम छन् यो देश र नेपाली जनताका पक्षमा । तर तिनको हामीले प्रचार गरेका छैनौँ, तर कम्युनिष्टहरूले आफूले गरेको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । त्यसैले अब मैले भनेको छु कि पार्टीमा प्रचार संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु जरुरी देखियो । हामीले काम गरेकै छौँ, जनताले थाहा पाएकै छन् नि भन्यौँ हामीले । तर अहिले जमाना फेरियो, सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मा¥यो । त्यसैले अब हामीले पनि आफूले गरेका कामको प्रचारै गर्ने त होइन तर जनतालाई थाहा दिनुपर्ने अवस्था देखियो । म महामन्त्री भएपछि त्यो कामको प्रणाली बसाल्छु । यो प्रणालीलाई नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता तहसम्म सञ्चार गर्नु जरुरी छ ।
–मुलतः त्यो भ्रमण भारतको सत्तारुढ दलको आमन्त्रणमा नेपली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट भएको हो । मैले अघि नै भनेँ कि हिजोको अपरिपक्व र ढुलमुले नीतिले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई ‘ड्यामेज’ गरेकै हो । हामीले वैदेशिक सहायता लिने काममा होस् या विदेश नीति सञ्चालन गर्दा पनि अत्यन्तै परिपक्वता आवश्यक छ । हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थको केन्द्रभागमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटा देशलाई एक र अर्कोलाई अर्को मापदण्ड अपनाउनु हँुदैन । यस्तो भयो भने देशका लागि घातक हुन्छ । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा होस् या अरु बेला नै किन नहोस् आफ्नो देशको फाइदा हेरेर नै कुरा गर्ने गर्दछु । त्यसरी आफ्ना देशको पक्षमा कुरा राख्दा उहाँहरूले सहजरूपमा लिएको पाएँ । यसपालिको भारत भ्रमणमा पनि मैले यो पक्षलाई जोड दिएको हो । हाम्रा दुई देशबीचका कतिपय असमझदारीहरूलाई पनि मैले त्यहा राखेँ । ठोस, स्पष्ट र आधारसहित मैले हाम्रा मुद्दाहरू राखेँ । त्यहाँ रहँदा भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका अध्यक्ष, भारतीय विदेशमन्त्रीलगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेँ । यसबाट हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस र भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका साथै भारतीय सरकार र हाम्रो सरकारबीचका कतिपय मुद्दाहरूमा कुराकानी भयो र यसबाट द्धिपक्षीय समझदारीहरूमा वृद्धि भएको छ ।